2019मा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू के हो?
लिङ्क अनुरोधहरू लिंक जुन रस डोमेन लिन र वेबसाइट रेटिङ सुधार गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका मध्ये एक छन्. लिङ्क अनुरोधको सहयोगको साथ, तपाईं आफ्नो साइटमा हालको सामग्री प्रयोग गरेर बाह्य लिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ. ब्याकलिङ्गिङ तपाईंको ब्रान्ड निर्माण र यसको जागरूकता सुधार्ने उत्कृष्ट तरिका हो. एकमात्र समस्या भनेको छ कि धेरै वेबसाइट मालिकहरूसँग निर्माणको लिङ्क गर्न गलत दृष्टिकोण छ. तिनीहरू अन्य वेबसाइटहरू आफ्नै आफ्नै बाहेक अरूलाई समावेश गर्न बिर्सन्छन्, तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्दछ र यसले वेबसाइट मालिकलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ.
यस लेखमा तपाईले केहि लिङ्कहरू पाउनुहुनेछ कि लिङ्क अनुरोध कसरी प्रयोग गर्ने तपाईको लिङ्क निर्माण अभियान सुधार गर्न. त्यहाँ यस लिंकमा फेला परेका अन्य बाहेकका लिंकहरूका लागि अन्य प्रकारका अनुरोधहरू छन्.
2019 मा ब्याकलिङ्क कसरी प्राप्त गर्ने?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणको माध्यमा तपाईँले विचार गर्नु आवश्यक छ वेबसाइटमा पुग्दा; तपाईंलाई ईमेल अनुकूलन गर्न आवश्यक छ ताकि यो साइटसँग सम्बन्धित छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ईमेल अनन्य छन् र जानकारी समावेश गर्दछ जुन पाठक द्वारा अत्यधिक सराहना गरिन्छ. तपाईले यो वेबसाइट विषयमा विशिष्ट बनाउन आवश्यक छ र आफ्नो व्यापार साझेदार देखाउनु भएको छ जुन तपाईंले आफ्नो वेब स्रोतमा राखिएको सामग्री द्वारा संलग्न गरेको छ. यो धेरै अतिरिक्त मिनेट ले ले प्रतिक्रियाहरु र वेबसाइटहरु मा एक ठूलो अंतर बनाउन सक्छ कि अधिकतर सम्भवतपाईँले तपाईंको अनुरोधको सकारात्मक जवाफ दिनेछ. तपाईंले यो जानकारीलाई कुनै पनि समयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ जब तपाइँ वेबसाइट मालिकको साथ व्यवसाय सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रयास गर्नुहोला.
एक लिंक निर्देशिका को अनुरोध गर्नुहोस
तपाईंको डोमेन को लिंक बनाउन को लागी सबै भन्दा सरल तरीका एक सीधा अनुरोध मार्फत छ।. यद्यपि यो विधि अरू भन्दा कम प्रभावकारी छ. वेबमास्टरसँग सम्पर्क गर्न र एक ब्याकलिंकको लागि सोध्नका लागि यसले केवल केहि मिनेट लिन्छ. यस्तो एक मामला को परिणाम तपाईं संग सहयोग गर्न चाहनु भएको स्रोतको गुणबाट अलग हुन सक्छ. ज्ञात प्राधिकारी वेबसाइटहरू प्राय: तपाइँको प्रस्ताव स्वीकार गर्दैनन् किनभने तिनीहरू वेब स्रोतहरूको कठोर छनोट छ जुन उनीहरूको पृष्ठमा सामग्री प्रकाशित गर्न सक्छन्।.
वर्तमान वेबसाइट को समस्याहरु को लागि खोज रहे हो
तपाईंको साइट मा एक गुणवत्ता backlink प्राप्त गर्न को लागि एक और अधिक बुद्धिमानी दृष्टिकोण एक वेब स्रोत स्कैन र संभव छ संग विशिष्ट त्रुटिहरु को उल्लेख छ तिनीहरूलाई समाधान. यो जानकारीलाई वेबसाइट मालिकको रूपमा मान्न सक्दछ किनभने तपाई समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ जुन उनीहरूको बारेमा पनि थाहा नहुन सक्छ. यदि तपाइँ यस लिङ्क अनुरोध प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यस डेटाको साथ निःशुल्क वेबमास्टर प्रदान गर्नुहोस्. ब्याकलिंक अनुरोध गर्नु अघि दोस्रो वा तेस्रो ईमेल संचार नभएसम्म यो प्रतीक्षा गर्न स्मार्ट छ.
तपाईंले फेला पारेको सामग्रीको स्रोतको रूपमा तपाईंको सामग्री प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ
तपाईंको साइटको लागि ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न यो फाइदा लाभकारी हुन सक्छ।. यदि तपाईंले ब्लग मालिकलाई उल्लेख गर्नुभयो र लेखको बारेमा टिप्पणी गर्नुभयो वा तपाइँलाई ब्याकलिंकबाट चाहानुहुन्छ, यो एक राम्रो संवाद विषय हो. ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने अर्को तरिका तपाईंले फेला पारेको पोस्टलाई उल्लेख गर्न, र त्यसपछि तपाईंले लिङ्क लिनु भएको लिङ्क माथि लिनु हुन्छ. तपाईलाई लेख पढ्न र ठाउँहरू हेर्नुहोस् जहाँ तपाईंको ब्रान्ड उल्लेख गर्दै उचित हुनेछ र प्राकृतिक हेर्नु पर्दछ. यदि यसमा हालको लिङ्क छैन, त्यसपछि सुझाव दिनुहोस् कि तपाइँको वेबसाइट यस लिङ्कका लागि राम्रो स्रोत हुन सक्छ Source .